lolo Staxx dia iray amin'ireo slots finday tsara indrindra amin'ny aterineto lalao, miorina amin'ny foto-kevitry ny tsara toetra sy ny famoronany. Ao amin'io lalao, dia mareva-doko tsara tarehy rehetra momba ny voninkazo sy ny lolo. Ny lalao dia Powered by dimy reels sy efa-polo betways mba hanampy anao ho mariky fandresena combos. The reels aroso manohitra ny resahana ny mahagaga renirano voahodidina tendrombohitra, ahitra sy ny hazo. Ny hazo amin'ny mahafatifaty voninkazo volomparasy hitsimoka toa tena manintona ambanin'ny lanitra amin'ny alina kintana mamirapiratra. Ny fisaintsainana mesmerizing mozika no nilalao mandrakariva eo aoriana izay toa mahagaga fotsiny. Ny hilokana in ity lalao ity dia manomboka amin'ny £ 0,20, ary ny ambony indrindra dia napetraka amin'ny voafetra ny £ 400 ny kofehy ireny
Zavatra tsy mahagaga nanana lohahevitra slots finday tsara indrindra amin'ny aterineto lalao dia nanjary tsy nisy hafa noho NetEnt. A anarana malaza ho an'ny fialam-boly amin'ny aterineto amin'ny alalan'ny Casino lalao izay ihany koa ny manampy ny mpilalao mandresy volantsika. Izay avy amin'ny manan-karena traikefa efa ho roapolo taona ao amin'io orinasa izay nanao azy ireo tompon-fahaiza-slot lalao.
Misy marika maro loko ity slots finday tsara indrindra amin'ny aterineto lalao izay mahatonga ny reels mijery miavaka. Misy mena, mavokely sy Violet voninkazo miaraka manoloana ny lolo mamirapiratra izay mandoa ny valisoa ambony indrindra ny 60x amin'ny Bet. Ny fanehoana an'ohatra voninkazo tsirairay rehefa mandoa 40x dimy ny marika hita eo amin'ny payline. Azonao atao ihany koa ny mahita ny sary famantarana ny milalao karatra avy Jack ho any Ace. Misy voninkazo fanehoana an'ohatra roa hafa izay hanampy anao handresy avy tombony endri-javatra. Izy ireo dia lavender miloko voninkazo sy iray hafa amin'ny maro loko ny felany.
Wild Symbol: Ny voninkazo miaraka amin'ny felany miloko isan-karazany dia ny bibidia, ary mandrakotra rehetra fanehoana an'ohatra ny tena ratsy bar aelezo. Toa rehetra ny reels sy manampy anao hanao Nohatsaraina tsikombakomba.
ampielezo Symbol: Ny lavender voninkazo dia marika ny aelezo endri-javatra io slots finday tsara indrindra amin'ny aterineto lalao. Telo na mihoatra endriky ny mariky ity, dia afaka handresy dimy hatramin'ny fito kofehy ireny maimaim-poana. Nandritra ireo spins, dia afaka manantena ihany cocoon fanehoana an'ohatra hiseho. Inona no tokony mba hitady ireo mamirapiratra ireo izay hivadika ho lolo, ary manidina ho any amin'ny ankavia indrindra ny reels. Foana ny dity izy ireo mandra-pahatapitry ny rehetra spins, manome anao fandresena mitambatra payouts teny an-dalana.
Amin'ny foto-kevitra mahagaga sy maro loko sary, izany slots finday tsara indrindra amin'ny aterineto manome fahafahana lalao isan-karazany dia afaka mandresy avy.
Jackpot Total £186053.92
Jackpot Total £87544.02
Jackpot Total £65906.41
Jackpot Total £14091.24
Jackpot Total £9143.92
Jackpot Total £5982.92
Jackpot Total £5553.17